In suuq ku mashquulsanayn casriga ah oo leh awooda Kombuyuutarada loo siman yahay in kombiyuutarka ah, macaamiisha dalbaday dheeraad ah iyo qalabka-dhamaadka sare ka badan. Shirkadaha hadda leeyihiin in ay ku dadaalaan adag tahay in aad dareentay sida tartankan uu noqday mid aad u adag. Maanta, qayb weyn oo ka mid ah dadka smart phone user midkood leeyahay Apple ah ama qalab Samsung ah baqdin ay fududaato in la isticmaalo iyo sifooyinka farsmada heerka sare ah ee ay bixiyaan labada. Nokia ayaa saldhig weyn ku user aad u yar, oo maalin kasta marayay qaar badan oo ka mid ah dadka isticmaala ay ka baxaan Nokia ah ee telefoonka ka wanaagsan smart. Nokia ee jirka telefoonada smart ciyaari OS Symbian ah, halka kuwa cusub Windows OS.
Maqaalkani waxa uu kasoo muuqday laba siyaabood oo xogta laga Nokia wareejiyo Samsung. Mid ka mid First waa habka caadiga ah ee buuga taas oo ay aad si ay u gudbiyaan wax kasta oo xogta si gooni gooni ah ugu horeeyay ee PC ka dibna qalab caga Samsung. Habka kale waa adigoo isticmaalaya Samsung Smart Switch oo kuu ogolaanaysaa inaad wareejiyo dhammaan xogta adiga oo aan gelinaya in dadaal badan.
Ka Nokia beddelashada Data in Samsung Gacanta
Isticmaalka Google Account
Isticmaalka Suite Nokia
Si aad u gudbiyaan xogta aad gacanta ka Nokia ah in Samsung ah, aad 'u baahan doontaa:
1. 2 USB fiilooyinka
2. laptop A ama computer
Isticmaalka fiilooyinka USB ah, xirmaan telefoonka Nokia oo aad telefoonka Samsung in computer ama laptop.
Laga soo bilaabo Explorer File ah, aad u hesho telefoonka Nokia iyo double click ku yaal si aad u eegto waxyaabaha ku jira.
Hel ictures folder magacaabay iyo double click ay u arkaan waxyaabaha ay.
Press Ctrl + a in ay doortaan oo dhan sawirada ku gal ama ay doortaan sawiro shakhsi adigoo gujinaya iyaga on iyadoo ay hoos u muftaaxa Shift ah.
Marka aad samaysay doorashada, xaq guji oo ka menu in kor u furmay dooro "Copy" ama haddii kale riixi Ctrl + c.
Hadda isticmaalaya File Baadh, aad u hesho telefoonka Samsung oo la furo jira. Meel ku galka ku tilmaamay "Sawiro" ama haddii ay jirto ma aha mid mar hore, mid ka dhigin. Si aad u samayso gal cusub oo xaq u riix oo ka menu in furay aynu tagno Ilmaha hadda> Folder.
Magaca Folder sida sawirada, fur adigoo double magcaabo ku yaal kadibna riix Ctrl + v in paste oo dhan sawirada Caadil ah oo idinka soo guuriyeen ka phone jir Nokia.
Isticmaalka nidaamka isku mid kuu soo gudbin karaa muusig iyo cajallado fiidyow ka Nokia in Samsung.
Waxaa jira labo siyaabood oo macneheedu yahay taas oo aad ka Nokia ah wareejin karaan xiriirada in qalab Samsung ah.
1. Isticmaalka account Google a
2. Isticmaalka Muuqaalka
Haddii qalabka Nokia ayaa account Google a qaybiyay u ah oo aad horey u dhan xiriirada aad synced in account Google in ka badan kaliya ee aad u baahan tahay inaad samayso mid ka mid ah wax ka badan. Si fudud u gasho in aad qalab Samsung oo isticmaalaya xisaab isla Google, iyo xiriirada oo dhan la synced doonaa qalab Samsung.
Haddii si kastaba ha ahaatee, aad leedahay a-Lumia aan ahayn qalabka Nokia, markaas kuu soo gudbin karaa xiriir adiga oo isticmaalaya Nokia PC Suite. Nokia Suite waa rasmi ah Nokia Software oo lagala soo bixi karaa http://www.microsoft.com/en/mobile/support/nokia-suite/ Waxaa jira software la mid ah kuwaas oo Nokia Suite PC oo lagala soo bixi karaa http: // www .microsoft.com / en / mobile / taageero / Nokia-pc-Suite / Labada ka mid ah waxaa loo isticmaalaa adeegyada la midka ah, laakiin waxay ku kala duwan waafaqsan qalab. Sidaa darteed, ka hor inta dhab ahaan degsado mid, raadi mid ka mid ah in uu yahay la socon kara qalab Nokia.
Waxaan isku dayi doonaa Nokia Suite for this article. Si aad u bilaabaan, raac tallaabooyinkan:
Download iyo rakibi Nokia Suite on your computer oo laptop.
Burcad Nokia Suite iyo Tag Tools Options.
Hel "Xiriirada" on galeeysid bidix oo guji ku yaal.
4. Tag hagaagsan oo Xiriirada Application Windows Xiriirada ka dibna riix "OK" ee geeska midig hoose.
Connect telefoonka Nokia in computer ama laptop kaliya aad qaybiyay Nokia Suite on, iyadoo la isticmaalayo cable USB ah.
Marka helitaanka telefoonka by Nokia Suite, guji icon xiriirrada (kan labaad) oo ku bar sare navigation, ama "Xiriirada" square in ay galaan "Xiriirada" daaqadaha.
Guji "contacts nidaameed" ee degaanka taleefanka si ay u bilaabaan in ay u hagaagsan xiriirrada phone Nokia la Windows Xiriirada.
The xiriirada ka phone Nokia ayaa loo wareejiyay aad laptop. Hadda, xiriirada waxay u baahan yihiin in lagu wareejiyo qalab Samsung ah. Taas aawadeed aad u baahan doontaa MobileGo Wondershare oo lagala soo bixi karaa http://mobilego.wondershare.com/
Download iyo rakibi MobileGo Wondershare aad laptop ama computer.
Connect qalab Samsung si aad laptop ama computer via cable USB iyo abuurtaan MobileGo.
Sug MobileGo in la ogaado qalab aad, u tag "Qalabka", ay helaan qalab aad iyo guji ku yaal dibna dooro "Xiriirada" ka menu bidix.
Tag "Import / Dhoofinta" "Import xiriirada ka computer" "ka Windows Cinwaanka Book" ka menu dusheeda.
Laga soo bilaabo menu oo u muuqata, dooro "Import"
Dhammaan xiriirada aad waxaa loo wareejin doonaa qalab Samsung oo lagu soo bandhigi doonaa waxa ku jira.
Faa'iido: Waxaad heli doontaa gurmad ah xogta on your computer oo la dambe loo isticmaali karaa.
Qasaarooyinka: waqti, daalo. Waxaa loo baahan kasta iyo shay kasta oo xogta si gooni ah u dhaqaaqay.
In hab la soo dhaafay, waxaan ka dhigay isticmaalka Wondershare MobileGo si ay u gudbiyaan oo kaliya xiriir ka Nokia in qalab Samsung. Farqiga u ahaa bayaan ah, marka la barbar dhigo kala iibsiga buugga, u gudbiyaan isticmaalaya MobileGo fududeeyey habka iyo sidoo kale hoos u waqtiga loo baahan yahay si weyn. Haatan aan aragno, sida ay u gudbiyaan inta kale ee xogta sida sawiro, muusig, sawiro, jadwalka iyo xitaa Apps isticmaalaya Wondershare MobileTrans .
Download Wondershare MobileTrans oo ku xidh si aad u computer.
Connect labada phone Nokia iyo telefoonka Samsung si aad laptop ama computer la Wondershare MobileTrans bilaabay.
Ka dib waxa uu helay qalab, dooro Phone in Phone Transfer ee barnaamijka, Wondershare MobileTrans muujin doonaa dhammaan waxyaabaha ay tahay in loo gudbin karaa in menu ah ku taalla badhtamaha ee shaashadda.
Hubi ama uncheck waxyaabaha sida aad looga baahan yahay oo ku dhacay "Ka bilow Copy".
Menu A ka muuqan doontaa si aad u awoodaan si ay ula socdaan horumarka kala iibsiga. Sug kala iibsiga si uu u dhameystiro.
Dhammaan xogta aad ka qalab Nokia ah waxaa loo wareejin doonaa qalab Samsung oo aan ka kaaftoomi kasta. Waqtiga kala iibsiga kala duwanaan karaan sida ay tirada xogta.
Faa'iido: Easy in ay isticmaalaan, oo lacag la'aan ah, si dhaqso ah, fursado ka kaaftoomi yar qalad
Qasaarooyinka: Wondershare MobileTrans ma aha software ah oo lacag la'aan ah
> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Nokia in Samsung